सबैतिर भालेवाद « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १७:४०
भालेवाद भनेको भाले अर्थात् पुरुष हुनुको पहिचान र चिन्ह मात्रै होइन । पुरुषवादी सोच र मानसिकता पनि हो । भालेवादी हुन पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै वान्छनीय योग्यता छैन । जसरी दलित जनजातिमा पनि ब्राम्हणवाद हुन्छ, त्यसरी महिला भित्र पनि भालेवाद शिर ठाडो गरेर बसेको हुन्छ । भालेवाद लैङ्गिक पहिचान होइन । यो संस्कृति, सोच,संस्कार र वर्चस्व पनि हो । प्रभुत्व मनोपोली र हैकम पनि हो । तसर्थ एकसे एक अधिकारवादी, महिलावादी पुरुष र महिलासंग भालेवादको भूत र हावा सवार भएको हुन्छ । भालेवादी संस्कृति मनोविज्ञान र व्यवहार रहेको हुन्छ ।
भालेवाद यत्रतत्र सर्वत्र व्याप्त छ । भालेवाद मुक्त घर समाज शायद छैन । भालेवाद पुरुषमा मात्र नभएर महिलामा पनि हुनु यो संस्कृतिको अन्तरघुलन हो । परिणामत महिला भएर पनि भालेवादी मानसिकताको बन्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, जुन हाम्रो समाजको प्राचीन समय देखि आजपर्यन्तको चरित्र बनेको छ । हामी जब्बर भालेवादको जन्जिरमा छौं । त्यो जन्जिरको लक बनाउन भालेवादी महिलाहरूको पनि ठूलो हात छ । प्रयोग हुनु र प्रयोग भएको नबुझ्नु महिलाको ठूलो कमजोरी छ । महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडन र नकारात्मक भेदभावका जराहरू केलाउन नजानेको, नसकेको कारण महिला पुरुषबाट पीडित मात्र छैनन्,नारी स्वयंबाट नारी प्रताडित छन् । डामिएका र सामाजिक जीवन चौपट पारिएका छन् ।
हाम्रो भालेवाद समाजका सबै निकाय अवयवको धुरी चढेर कुखुरी काँ भनेर बासेको छ ।भाले नबास्ने कुनै धुरी भेट्टाउन मुस्किल छ । चाहे त्यो गाउँको गरिबको झुपडीको धुरी होस् या सहरको महलको धुरी या होस् सिंह दरवारको धुरी । भालेवाद बासेकै हुन्छ । नारीलाई दोश्रो दर्जाको भोग्य वस्तुको रुपमा हेरेकै हुन्छ । त्यसैले पुरुष अहंमलाई पोथी बासेको उसै मन पर्दैन । झन् पोथीको प्रतिरोधी चेतना कसरी पचोस ?कदाचित महिलाले प्रतिरोधी चेतना राखे भने त्यो असह्य हुन्छ । यसर्थ भाले जातिमा रहेको छिद्रान्वेषी पुरातन पुरुष भाष्य र पुरुष सत्ता अनेकन सन्दर्भ झिकेर, निर्धो तर्क गरेर, आफ्नो हित प्रवद्र्धन गर्न र पुरुष दण्डको भागीदार बन्न सक्तैन र हुँदैन भनेर हुँकार गरिरहेका हुन्छ । महिला माथिको उत्पीडनलाई साथ दिन महिलाकै काँध चढेर महिला विरुद्ध अपमानको विष घोप्ट्याइ रहेछ भालेवाद ।
जसलाई साथ र समर्थन दिन नारीहरू नै तँ छाड म छाड गरेर सतहमा देखिएका छन् । सडकमा पोखिएका छन् । पुरूष सत्तालाई काँध हाल्न नारी सत्ता आएको छ । आफ्नो स्वार्थ÷ पुरुष हित र वादलाई धक्का नपरोस् भनेर नारीलाई होच्याउँदै,गिज्याउँदै सस्ता पुच्छ्रे प्रश्न गरेर प्रतिरोधी चेतनालाई धुलिसात पार्न नारी अस्मितामा औंलो तेर्स्याउँदै ,नैतिकताको कुरा निकालेर चरित्र दोष देखाउदै कमजोरीको सबै कारण नारी भएको मत प्रकटीकरण गर्दै बसेको छ पुरुष चेतना । पुरुष चेतनाको भाष्यलाई लाल मोहर लगाउने काममा नारीहरू लागिपरेका छन् । आफ्नो प्रभाव र वर्चस्वमा रहेका भाषा,शक्ति, सन्दर्भ, माध्यम र अधीनस्थ चेतनालाई प्रयोग गरेर पुरुष भाष्य र प्रभुत्वलाई चुनौती दिंदै उठ्न लागेको प्रतितन्त्रलाई अविवेकी घन र भालेवादको अहमले हिर्काई रहेका पुरुषलाई बल दिन तम्सिएका नारीहरूको झुण्ड देख्दा लाग्छ नारी अधिनस्थ भएर बस्न चाहन्छन् ।
पराधीन हुननै मजा मान्छन कि क्या हो ? नारी पुरुष सत्ताकी अर्धाङगिनी बन्न राजी छ । आफ्नो अस्मितालाई बन्धक बनाएर नारी पुरूष नीचतालाई पुरस्कृत गर्न जमानी बस्न हरहमेसा तयार छ । निरुत्साहन दिनु पर्ने चरित्रलाई प्रोत्साहन दिन प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । नारीहरूको समर्थन र सुभेच्छा पाएको पुरुष आफ्नो शक्तिमा क्षय हुन् नदिन पुरुष एक हुनुको नारा भट्याइरहेको छ । भालेवादको सारथी बन्न मन्जुर छ नारी । त्यसैले सहरमा रमिता छ । रमिताको पात्र बनिरहेकी छ कानुनको नजरमा सेक्सको लागि अयोग्य एक वालिका । बैसालु उमेर लोभ मोह माया र अवसरको भुलभुलैयामा परेर एक नावालिका कसैसँग सेक्स गर्न पुग्छे । परस्पर सम्झौतामा सेक्स रहर थियो, रुचि थियो होला ? अनि बाध्यता पनि हुनसक्छ ? तर त्यो अवोध वालिका प्रयोग हुन्छे सेक्स गर्ने पुरुषबाट अनि उनीहरूले सेक्स गरेको थाहा पाउने अर्को पुरुषबाट । तव अनेकन षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिन्छ त्यो वालिका प्रयोग हुन्छे अनि शुरु हुन्छ मुद्दा मामला । मान्छेको रूपमा गल्ति जोसुकैले गर्न सक्छ । मुद्धा मामला परेपछि त्यसको छानबिन गर्ने सरकारी निकायहरू छन् प्रहरी प्रशासन र अड्डा अदालत छ ।
तर एउटा सेलिब्रेटीको नाममा त्यसलाई प्रभाव पार्न मान्छेहरु सडकमा निस्कन्छन, प्रहरी आफै बन्छन, वकिल र न्यायाधीश आफै हुन्छन् र फैसला गर्छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पढेलेखेका मान्छेहरू नबोल्ने कुरामा बोल्छन । मौन रहने कुरामा समर्थन गर्छन । महिलाको योनीमा रहेको इज्जतको कुरा चल्छ । बेइमानी गर्ने पुरुष लिङ्गलाई इज्जतले छुंदैन,तर महिला योनीमा चरित्रको इज्जतको कुरा जोडिन्छ । समान कसुरमा असमान दण्डको कुरा चल्छ । नेपाली समाजको यौन मनोविज्ञानको स्थिति कति भयानक एक पक्षीय र असन्तुलित छ ।
महिला सामाजिक र नैतिक रूपमा च्यूत ठहरिन्छे भने पुरुषको हकमा इज्जतको सवालमा कुनै आपत्ति पर्दैन । यौन सम्बन्ध पुरुषको एकलौटी हक हो । केवल कानुनले मात्रै अपराधको परिभाषा भित्र राख्छ । पुरूष लिङ्गको कारण मात्र बलियो छैन, पुरुष मानसिकताको कारण बलियो र महिला मानसिकताकै कारण निर्वल र निस्तेज बनाइएका छन् । प्राकृतिक रूपमा नै महिला भन्दा म स्वत बलियो छु भन्ने एक अवधारणा छ । म शारीरिक रूपमा पुरूष भन्दा कमजोर छु भन्ने हीनताबोधी मानसिकता महिलामा छ । तसर्थ पुरुष अधिनस्तता स्वीकार्य मनस्थिति निर्मित छ । पुरुष नारीलाई केवल भोग्य वस्तु र सन्तान उत्पादनको साधन मान्छ । सामाजिक रुपमा पुरुषलाई बहादुर,मर्द, साहसी र नारीलाई कमजोर दुर्वल र पुरुष अधिनस्थ बन्नुपर्ने प्राकृतिक बाध्यता नै रहेको भ्रमपूर्ण अवास्तविकता वास्तविक लाग्ने समाज मनोविज्ञान तयार छ । महिला केवल सुन्दर बन्नुपर्छ देखिनु पर्छ र सुन्दर बन्ने बनाउने सांस्कृतिक अवधारणा भित्र उनलाई कमजोर पारेर आफ्नो अधिनस्थ बनाउने खोटपूर्ण पुरुष अभिप्राय रहेको छ । जसलाई महिलाले चाहेर नचाहेर बुझ्न सकेका छैनन् ।
महिलाको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि उनको कसिलो योनीमा फिट गरिदिएको छ पुरुष हैकमवादले, तसर्थ पुरुष आश्रित बन्नु महिलाको नियति र संस्कृति दुवै हो । महिला पुरुषको आपसी समझदारीको सहवासलाई सार्वजनिक चर्चा र चासोको विषय बनाइन्छ । इज्जत पुरुषको नजाने र महिलाको मात्रै जाने भाष्य निर्माण गरिन्छ । जसलाई बदल्नु आजको समय र परिवेशको दायित्व हो । यो दायित्व महिलाको मात्र नभएर आम पुरुषको पनि हो । समाज,संस्कृति, परम्परा चालचलन, राज्य अर्थतन्त्र, शिक्षा, राजनीति सबैतिर रहेका छिद्रहरू नियाल्नु र केलाउनु जरुरी छ । अन्यथा समाज अरु अराजक र संस्कारहीन प्रवृति उन्मूख रहन्छ । भालेवादको अन्त्य गर्न स्वयं भालेजातका मान्छेको सुझबुझपूर्ण व्यवहार र नैतिकता इमान्दारिता र निष्ठाको खाँचो छ । त्यस्तै आश्रित हुने मनोविज्ञानबाट महिलाहरू पनि माथि उठ्नु पर्छ ।
हाम्रो भालेवादको व्याख्यात्मक टिप्पणी आफ्नो अनुकुल देखिन जहाँ र जताबाट पनि आएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । व्याख्यात्मक टिप्पणी आफ्नो बचाउको लागि होइन कानुन नीति नियम र नैतिकताको लागि वैध हुनुपर्छ । अवैध व्याख्या विश्लेषण र टिप्पणी फगत सस्तो मनोरञ्जन र नैतिकता क्षयको लागि मात्रै हो । समाज र मानवका लागि हुन सक्दैन । समाज सुसंगत न्याय र निष्पक्षताले मात्र सभ्य र सुसंस्कृत बन्छ ।
( माथि उल्लेखित लेखकका नीजी विचार हुन्)